सनसिटी अपार्टमेन्टमा कोरोना आशंका गरिएसँगै ४ सय परिवार त्रासमा, बैंकर पनि जोखिममा ! «
सनसिटी अपार्टमेन्टमा कोरोना आशंका गरिएसँगै ४ सय परिवार त्रासमा, बैंकर पनि जोखिममा !
Published : 14 April, 2020 7:46 am
काठमाडौंको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा रहेका तीन जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको आशंका गरिएसँगै सो अपार्टमेन्टका सयौँ परिवार त्रासमा छन् । आशंका गरिएसँगै प्रहरीले सो क्षेत्रलाई सील गरेको छ । यस घटनापछि अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका झण्डै ४०० पारिवार त्रासमा रहेका छन् ।